10-ka kooxood ee ugu hantida badan Adduunka oo la shaaciyey… (Kaalintee ayey kaga jirtaa kooxdaada?) – Gool FM
10-ka kooxood ee ugu hantida badan Adduunka oo la shaaciyey… (Kaalintee ayey kaga jirtaa kooxdaada?)
Haaruun July 14, 2016
(World) 14 Luuliyo 2016 – Shirkadda Forbes ayaa ku dhawaaqday 10-ka kooxood ee ugu qiimaha badan Adduunka, waxaana kaalinta koowaad hoos uga dhacday Real Madrid oo kaalinta koowaad iska haysatay tan iyo sanadkii 2011-kii.
Kooxda NFL ee Dallas Cowboys ayaa kaalinta koowaad 10-ka kooxood ee ugu qiimaha badan kala baxday Real Madrid, waxaana hantideeda lagu qiimeeyey 4 bilyan oo dollar oo u dhigan ta 3.02 bilyan oo gini.
Real Madrid oo hoos ugu soo dhacday kaalinta labaad ayaa hantideeda lagu qiimeeyey 3.65 bilyan oo dollar oo u dhiganta 2.75 biyan oo gini, halka Barcelona oo soo fariisatay kaalinta saddexaad hantideeda lagu qiimeeyey 3.55 bilyan oo dollar oo u dhigtanta 2.68 bilyan oo gini.
Manchester United oo intii u dhaxaysay sanadihii 2011 ilaa 2012 kaalinta koowaad ku jirtay ayaa hadda u dhacday kaalinta shanaad, waxaana hantideeda lagu qiimeeyay 3.32 bilyan oo dollar oo u dhiganta 2.5 bilyan oo gini.
Dhinaca kale Kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Manchester United ayaa noqday kaliya saddexda kooxood ee ka ciyaara kubadda cagta oo ku jira liiska 10-ka kooxood ee ugu hantida badan adduunka.
Haddaba halkaan hoose ka eeg 10-ka kooxood ee ugu hantida badan Adduunka:-
Kooxda Qiimaynta ($bn) Ciyaaraha Qiimayntii 2015
Kabtanka Man City ee Vincent Kompany oo looga gacan haatinayo horyaalka Turkiga